Sọlfọ Black, 2-Amino-4-Nitrophenol, Sọlfọ Black BR ​​- Na-eme
Sọlfọ Black BR
Sọlfọ Black B
Sọlfọ Black BR ​​Liquid
Osisi anyị nwere usoro ọgbara ọhụrụ iji mepụta Sọlfọ Black B, sọlfọ Black BR, 2, 4-Dinitrochlorobenzene na 2-Amino-4-nitrophenol.
Bright-black flake ma ọ bụ ọka nwere ike dị iche iche. Tumadi eji dyeing na owu, viscose, vinylon na akwụkwọ.
Iche iche dị iche iche na sọlfọ Black BR.
Icha edo edo na-acha aja aja kristal. Maka imepụta dyes, pesticide na nkà mmụta ọgwụ n'etiti.
Yellow crystal, ntụ ntụ. Maka ịmepụta akwa na ọgwụ. Tumadi eji acid acid aja aja RH, acid green 3G, nwa BL, BRL, BGL.
Foring Bubata & Export Co., Ltd. e hiwere na 2004. companylọ ọrụ anyị nwetara ISO 9001: 2006 na ISO 14000. Anyị enwetawo ahụmịhe bara ọgaranya maka ibupụ ngwaahịa ndị dị mma nke China. Dabere na osisi anyị siri ike, anyị nwere ike ịkwado sọlfọ ojii na ndị etiti ya n'ahịa esenidụt.
The ezi ngwa ngwa Njirimara, na-eri irè & ala nke applicability n'okpuru dị iche iche nhazi ọnọdụ iyuzucha, ọkara na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-eme ya otu n'ime ndị kasị ewu ewu dyestuffs.
Tumadi eji dyeing na owu, viscose, vinylon na akwụkwọ.
38th dai + Chem Bangladesh Expo 2019
4th Sep, 2019 ruo 7th Sep, 2019 na International Convention City Bashundhara, International Convention City Bashundhara, Purbachal Express Hwy, Dhaka, Bangladesh. CEMS-Global USA's International `` Dye + Chem series of Exhibition '' ruru ya a ...
Agba & Chem Pakistan EXPO
Agba & Chem Expo bụ ihe omume pụrụ iche iji nye ọrụ kemịkal zuru oke na nke dị elu na kemịkal, ihe ejiji na ụlọ ọrụ ndị jikọtara ọnụ iji mepụta akara, mepee ahịa ọhụrụ ma chụpụ ahịa. Agba & Chem Expo 2019 na-enyekwa nghọta na ...
CPhI bụ ihe eji eme ọgwụ ọgwụ ewepụtara ihe karịrị afọ iri atọ nke ijikọ ọnụ ndị na-agagharị agagharị na ọgwụ ahịa. Aha guzobere na ụlọ ọrụ ahụ, CPhI Worldwide bụ ihe pụtara ìhè na kalenda pharma na-eme ka ọtụtụ puku pha ...
Ekwentị ： 0086-13603111583
Adreesị ： 1211 ShangDe Plaza, No.8 Kangle Street, Shijiazhuang, China